प्रकृति, हामीलाई झमझम पानी देऊ कि बेजोड हावा! :: भानुभक्त :: Setopati
यसपालि २७ सय ठाउँमा डढेलो, काठमाडौंमा सधैँको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा कम पानी
नासाको स्याटेलाइटले देखाएको नेपालको डढेलो (थोप्लामा)।
'यो बेला त हावाहुरी चल्ने, असिना-चट्याङ पर्ने हुन्थ्यो। चैतको महिना रूखका पात पनि नहल्लिने यस्तो भएको मलाई याद छैन,’ श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने,‘पुस-माघतिर काठमाडौंमाथि चिसो हावाको बिर्को लागेर घाम लाग्दैनथ्यो। चैतमा तुँवालो लाग्थ्यो तर यस्तो आँखा पोल्नेचाहिँ हुन्नथ्यो।'
'अक्टोबरपछि पश्चिमबाट एउटा पनि बलियो प्रणाली आएन। एक-दुई चोटी हल्काफुल्का पानी त पर्‍यो तर देशैभरि एकैसाथ पानी पार्न सक्ने गरी 'मोइस्चर' बोकेर हावा आएन,’ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद् प्रतिभा तुलाधरले सेतोपाटीसँग भनिन्,‘अहिले प्रि-मनसुन चलिरहेको छ। अझै पनि पश्चिमबाट बलियो प्रणाली आउने कुनै सम्भावना छैन।'
'पोहोर साल हिउँदमा धेरै पानी परेको थियो, यसपालि पर्दै परेन। यो मौसममा वर्षेनी हुने ‘परिवर्तन’ मात्र हो कि जलवायु परिवर्तनको असरले यस्तो भयो? ठ्याक्कै भन्न सकिन्न,’ मौसमविद् तुलाधरले भनिन्,‘यसपालि हिउँदमात्रै होइन चैत-वैशाखको प्रि-मनसुन पनि सुख्खा नै हुने देखिएको छ।'
लामो समय डढेलोको 'प्याट्रन' अध्ययन गरेका शर्माका अनुसार यसपालि भने अत्याधिक धेरै डढेलो लागेको छ। अहिलेसम्म मात्रै पोहोरभन्दा १४ गुणाभन्दा बढी डढेलो लागिसकेको उनले जनाए।
'पोहोर साल मार्च ३० सम्म १ सय ८८ ठाउँमा डढेलो लागेको थियो। यसपालि २ हजार ७ सय १३ ठाउँमा डढेलो लागेको देखिन्छ,’ शर्माले सेतोपाटीसँग भने,‘पोहोर ४० जिल्लामात्र प्रभावित भएका थिए भने अहिले ७३ जिल्लामा डढेलो फैलिएको छ।'
'हिउँद निकै सुख्खा भयो। बन-जंगलमा ज्वलनशील पदार्थ धेरै जम्मा भयो,’ शर्माले भने,‘एकैचोटी धेरै ठाउँमा लागेको डढेलोले वायुमण्डलमा अत्याधिक धुँवा जम्मा भयो।'
डढेलोबाट आएको यो धुँवा यति धेरै दिनसम्म हामीभन्दा माथि सतहमा बसिरहन सक्दैन्थ्यो। तर यसलाई सतहमै राखिरहन फेरि यसपाली 'लोसे' पश्चिमी वायुले भूमिका खेल्यो।
'अहिले पश्चिमी वायु नेपाली आकाशमा छ, त्यसले पानी पार्ने बादल वा ठूलो हावाहुरी चल्ने प्रणाली विकसित गर्न सकेको छैन,’ मौसमविद् तुलाधरले भनिन्,‘बरू भारतलगायत अरू ठाउँको धुलो बोकेर आइरहेको छ।'
उनका अनुसार सुस्तरी चलेको हावाले पानी पार्ने 'मोइस्चर' ल्याउनुको सट्टा धुलो ल्याउने गर्छ।
'अहिले त्यस्तै हावा आइरहेको छ,’ उनले भनिन्।
'हामीले गर्न सक्ने भनेको डढेलो कम गर्ने हो। डढेलोको मुख्य याम अझै आउनै बाँकी छ,’ पाण्डेले भने, ‘पहिलो त मान्छेलाई डढेलो लगाउन निरूत्साहित गर्नुपर्छ। दोस्रो, यति धेरै ठाउँमा डढेलो लाग्दा पनि हामी केही गर्न सक्दैनौं। विदेशतिर हेलिकप्टरबाट रसायन फालेर भए पनि आगो निभाउछन्। हामीले पनि त्यतातिर सोच्नुपर्छ।'
'सरकारले अहिले विद्यालय बन्द गरेको छ। तर यसले हामीलाई जोगाउदैन,’ पाण्डेले भने,‘प्रदुषण घटाउनै पर्छ। त्यसका लागि निश्चित उद्योग बन्द गरेर सवारी साधन कम चलाउनेलगायत उपाय लगाउनु पर्छ।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १८, २०७७, ०७:२२:००